कति कैद र जंगली प्रत्यक्ष कछुवा,
यस कुखुरा बजार, वा सानो कछुवा स्टोरमा मा खरीद, हामी यसलाई आफ्नो नातिनातिनी गर्न bequeath गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने आशा - हामी यी प्राचीन स्थलीय र जलीय सरीसृप लामो समय, एक परी कथा जस्तै बाँच्ने सुने। तर यहाँ यो दुई वा तीन वर्ष जान्छ, र हाम्रो पाल्तु जनावर मर्छ। वास्तवमा, प्रत्यक्ष कछुवा कसरी पुरानो छ? यो प्रश्न कुनै एकल जवाफ छ। जीवन span यी सरीसृप प्रकार र आफ्नो प्रजाति मा हदसम्म निर्भर छ, ग्रह पृथ्वी बारेमा 270 (प्रत्यक्ष हाम्रो देशमा ती सात) मा छन्।
अवधि मा कहीं देखिने भएको Mesozoic युग को (बारेमा 220 मिलियन वर्ष पहिले), तिनीहरूले सहुलियत विकास गर्न हिचकिचाए र हाम्रो आँखा अगाडि देखा अझै पनि जमीन मा कुनै चरा वा स्तनधारी थिए जब तिनीहरूले समयमा आफ्नो पुर्खाहरूको थिए लगभग एउटै छ । तथापि, यस्तो "प्रागैतिहासिक" उपस्थिति सबै अन्टार्कटिका को अपवाद संग सबै महादेशमा लाइभ भूमि, बस्ती बसाना यी बख्तरबंद भद्दा प्राणीहरू रोक्न थिएन। किनभने carapace पाठ्यक्रम, जनावर रुचि, न्यानो अक्षांश, - चिसो बाट गरिब सुरक्षा। तर यो हेर्न भयो समुद्र कछुवा को बाल्टिक, Barents, र पनि मा को Bering समुद्र! तिनीहरू सबै समुद्रहरू महारत छ, अलवण नदी र पोखरी, swamps मा, पाठ्यक्रम, बाँच्न र भूमि। तर यहाँ , कछुवा कसरी बाँच्न यसलाई गणना गर्न गाह्रो छ।
यी सबै सरीसृप असामान्य tenacious। टाउको shred गर्न घाइते व्यक्तिगत दिन दर्जनौँ छिर्न सक्छ, र एक प्रतिलिपि एक मस्तिष्क खुसीसाथ छ महिना लागि उहाँलाई बिना बस्ने हटाउन। ठीक किनभने डायनासोर गर्न पुरातन मूल र वंशावली, जसमा आधुनिक वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका रूपमा, त्यहाँ जीवनको कुनै एकल केन्द्र थियो, त्यसको निकटता को कछुवा चाँडै घाइते पछि ठीक र संक्रमण प्रतिरोधी। निस्सन्देह, यो छैन जो शरीर को एक हराएका भाग बढ्न सक्नुहुन्छ, तर अझै पनि, यी सरीसृप आफ्नो अचम्मको जाँगरको हामीलाई विस्मित को कीडे छ। औसत यति धेरै कसरी कछुवा बाँच्न?
माउरिटिअस 152 वर्ष को द्वीप मा फ्रान्सेली नौसेना आधार मा बस्ने मैरियन, को एक विशेष प्रकारको दस्तावेज उमेर। तर, वैज्ञानिकहरूले प्रजाति को उमेर छैन सीमा छ भन्न: मैरियन खुसीसाथ पाठ्यक्रम, सबैभन्दा अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न नभएसम्म, 200 साल जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। यरूशलेमको monasteries मा विहारको जीवन को राम्ररी क्रमिक बिवरण थिए। 120 वर्ष को एक औसत - उनको "पाल्तु जनावर" आए जीवन र fraternity विवरण अध्ययन गरेर, तपाईं कति प्रत्यक्ष कछुवा भू-मध्य प्रजाति बारेमा कुनै न कुनै विचार गर्न सक्छन्। जीवन पथ बाल्कन केहि छोटो कछुवा - 90 वर्ष। एउटा रातो-eared Sliders, अलवण गर्न प्रमुख, केवल 50 वर्ष तन्काउनुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ।
जनावरहरूको अवलोकन, कैद बस्ने कति कछुवा स्थापना गर्न मदत संसारभरि चिडियाखाना सञ्चालन। दीर्घायु को रेकर्ड पहिलो सेट कछुवा को विशाल प्रजाति: विशाल कछुवा - 180 वर्ष, आइभोरी - 150, र तथाकथित "shporonosnaya" - लगभग 115 वर्ष। तर "गिनीज बुक" मात्र भन्दा संग सुन्दर मारा को सेचिलिस, 152-प्लस वर्ष - माउरिटिअस को टापुमा फ्रान्सेली नाभिकहरु धेरै पुस्ताका मार्फत भएको छ जो। जनावर धेरै दुर्लभ छ, किनभने कुनै एक थाह - सबै भन्दा ठूलो भूमि कछुवा को उमेर रेकर्ड - विशाल leatherback।
दुर्भाग्यवश, सबै यो हतियार पहने परिवार मा च्याम्पियन-centenarians पानी कोटीमा पर्छन्। सानो चरा, को खोल व्यास एक मीटर को केही दहाई भन्दा बढी गर्दैन - र हाम्रो अपार्टमेन्ट, एक नियम रूपमा, एक पाल्तु जनावर कछुवा रूपमा बाँचिरहेका छौं। यी सरीसृप जीवन span हेरविचार मा धेरै हदसम्म निर्भर छ। मालिक घरेलू recluse वृद्धि गर्न मात्र होइन सुनिश्चित हुनुपर्छ जनावर मात्र एकदम सन्तुलित भोजन (ताजा सहित) हो, डेलाईट घण्टा एक विशेष गर्मी दीपक संग हिउँदमा, तर पनि बग धेरै उत्प्रेरित गर्छ कि निश्चित गर्नुहोस्। स्वस्थ जीवन शैली - आफ्नो पाल्तु जनावर को दीर्घायु को एक धरौटीको र राम्ररी यसलाई हेरचाह भने, यो 50 वर्ष सम्म बाँच्न सक्छ।
शिक्षाविद् Pavlov जीवनी वैज्ञानिक काम
को depopulation के हो?
लुकेका बेरोजगारी: विचार
यो आणविक संरचना र भौतिक गुण
सामाजिक र मानवीय ज्ञान - ... सामाजिक र मानवीय ज्ञान को विशेष छ
Tooltip: कार्य र कसरी सिर्जना गर्न
जो गुण charismatic मान्छे छ?
Demotivators - शब्द के सँग सम्बन्धित छ?
राम्रो गुणस्तर को उचित फिर्ती सामान
दाल: खाने नुस्खा
यस कम्पनीको मुनाफा को विश्लेषण। विजेता हुनुहुन्छ?
बाइसेप बढ्दै छ छैन: के? बसिरहेका बाइसेप लागि dumbbells भारोत्तोलन। घर मा बाइसेप कसरी निर्माण गर्न
आलु देशको लागि नुस्खा - शैली। सरल, स्वादिष्ट, तातो
Rheumatoid गठिया मा "Methotrexate": समीक्षा। प्रयोगको लागि निर्देशन, तयारीको को विवरण
रोमन Bogdanov: जीवनी र चलचित्र